Tao Besomaty, Kaominina Manandaza, Distrikan’i Miandrivazo no niseho ity loza ity ny 13 novambra teo. Miaramila kaporaly manatevina ZRPS Bravo, mamita iraka momba ny tsy fandriampahalemana amin’iny faritr’i Betsiriry iny no namoa-doza noho ny toaka nosotroiny.
Niantefa tamin’ny fen’ilay miaramila, kaporaly namany, ny bala ary gorobaka ny fen’ity farany. Nalefa notsaboina avy hatrany ao amin’ny Hopitaly miaramila Soavinandriana – Antananarivo ny maratra.
Miandry ny fanomezan-dalan’ireo lehibe mpifehy isan’ambaratonga ny fanokafana fanadihadiana ity tranga ity.
Hotanterahina anio tolakandro amin’ny efatra ora etsy amin’ny Kianja Monisipaly Mahamasina ny lalao fifanintsanana hiadiana ny tapakila ho amin’ny CAN 2021 hatao any Cameroun, hifanandrinan’i Madagasikara sy Ethiopia.
Hitantara mivantana ny lalao ny Radio Nasionaly Malagasy (RNM), afaka manaraka mivantana ny lalao amin’ny Televiziona Malagasy (TVM) ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina. Miandry ny fahataperan’ny lalao kosa ireo any amin’ny Faritra vao afaka hahita ny baolina amin’ny TVM, mety any amin’ny valo ora sy sasany alina any.
600 tapitrisa Ariary (150 000 Euros) ny saran’ny fampitana mivantana ny lalao tsy maintsy aloa amin’ny CAF na Kaonfederasiona afrikana amin’ny baolina kitra raha te handefa izany amin’ny fahitalavitra, hoy ny fanazavan’ny Tale jeneralin’ny ORTM.